virtual လေကြောင်းလိုင်းများ, ကူပါ!
virtual လေကြောင်းလိုင်းများ, ကူပါ!3နှစ်ပေါင်း5months ago #249
ဟလို! အဲဒီကို virtual လေကြောင်းလိုင်းများအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ငါပြီးသားပဲသိရန်လိုချင်တာတွေဒီတော့ဒီနေရာမှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုနေသည်ကိုငါသိ၏။ ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုငါသိသင့်သည်အခြားအရေးကြီးသောအရာများကိုငါ့ကိုပြောပြပါတစ်ခုခုကိုသိကြပါလျှင်ထို့နောက်ရှိသည်နှင့်ရန်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုအစီအစဉ်များကိုသိလို။ သို့သော်လည်းငါသည်သမျှသောင်ထင်ပါတယ်။ Oh! သငျတို့သသူတို့တွေကြိုဆိုနေတချို့ကို virtual လေကြောင်းလိုင်းအကြံပြုချက်များရှိပါက!
virtual လေကြောင်းလိုင်းများ, ကူပါ!3နှစ်ပေါင်း5months ago #250
အစအဦး, သင်လေယာဉ် Simulator ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာသူတို့ထဲကအနည်းငယ်ဖြစ်ပြီး, ကြောင်းရှေးခယျြမှုသငျသညျရှိသည် PC ကိုပိုမိုတိကျစွာ Microsoft ကပျံသန်းမှုရေး Simulator 2004 ပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့် FSX,X-Plane နှင့် P3D။ ထိုသူအပေါင်းတို့ payware ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ အဲဒီမှာတဦးတည်းအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပျံသန်း sim ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အလေးအနက်ထားမကောင်းတဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါငါပင်အကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့နှောင့်ရှက် wont ။
ထိုအခါလေကြောင်းလိုင်းပေါ် မူတည်. အချို့ကိုသင်လေယာဉ်များလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတဦးတည်း, ထို ACARS ဂလိုင်းတခုဖြစ်တယ်။ ဒါကတဦးတည်းလည်းတယောက်ကိုတယောက် VA သို့ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ တချို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်, ထုံးစံ clients များရှိသည်။ မကျင့်သောသူတို့, အများအားဖြင့်အချို့အလွန်အဟောင်းနှင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားစိတ်မချရ clients များကိုသုံးပါ
အခြားအပြင်သင်၌အချို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည် add-onသင့်ရဲ့ပျံသန်းမှု sim ၏အချို့သောရှုထောင့်များကိုတိုးတက်စေရန် s ဖြစ်သော်လည်းငါပြောသလိုပဲဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
virtual လေကြောင်းလိုင်းများ, ကူပါ!3နှစ်ပေါင်း5months ago #251
ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအကြံပြုမယ်လို့ FSX, ဒီအချက်မှာသော်လည်း .... သင်က MS တော့ဘူးဟာ Disk ကိုဗားရှင်းကိုထောက်ပံ့မထားဘူးငါ့အအသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြစ်ရေနွေးငွေ့ကနေတဆင့်ရရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ငါရေနွေးငွေ့ Edition ကိုများအတွက်စျေးနှုန်းတစ်ဦးခိုးယူ freaking ဖြစ်ပါတယ် .... ဂုဏ်နတုံးဖြစ်ပေါ့! ငါအဘို့အ $ 60 paid FSX: Gold Edition (Deluxe + Acceleration) Add-on), သင်ဒါ ya ဝေးလျော့နည်းပေးဆောင်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာအားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ payware အားလုံးအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပေမယ့်စာရင်းတိုပါ။
တကယ်တော့အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း VA သို့များ၏ပိုင်ရှင် / CEO ဖြစ်သူရယ်သင်ချင်တယ်ဆို payware လေယာဉ်တစ်စင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါကြိုဆိုနေစဉ်ကျနော်တို့ VA သို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လေယာဉ်များဝယ်ယူရန်သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျ / ချင်ပါပြီအားလုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်လျှင်, ငါနှင့်အတူအေးမြတယ်။ ငါမြင်လမ်း ... ဘဝမှာတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးပြည့်စုံ B ကို * TCH ဖြစ်, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်တဦးတည်း၏အပိုစေနိုင်သနည်း ဟားဟား
ငါကမျှမျှတတလေးလေးနက်နက်ထားခဲ့တဲ့ကောင်လေးပါ။ ငါလေယာဉ်မှူးများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ (ငွေကြေးအပိုဆုကြေးမှသည်၎င်းတို့အတွက်သာပေးအပ်ထားသောလေယာဉ်တစ်စင်းအထိ) သည်အချို့သောဆုများပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်တမ်း en English (the lol ကဲ့သို့) site ပေါ်တွင်အခြေခံပြီး၊ (btw ကိုသုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသော) သူတို့၏ flight tracking software ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအခမဲ့လေယာဉ်ပျံများအားလုံးကိုသင့်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည် (အချို့မှာဤနေရာတွင်ရှိနေသည်)
ငါအများအားဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာခရီးကုန်တင်လုပ်ပေးနေချိန်မှာသော VA သို့အများဆုံး $ စေသည်ဘာကိုဖွင့်ချိန် မှစ. , ငါ့လေယာဉ်မှူးကသူတို့လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိသောအရာကိုဆုံးဖြတ်ကြကုန်အံ့။
0.231 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်